सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने गित गाउँदा गाउँदै..,द भ्वाइस अफ नेपालमा भक्कानो छोडेर रोइन मेचु
नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने गित गाउँदा गाउँदै..,द भ्वाइस अफ नेपालमा भक्कानो छोडेर रोइन मेचु
नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने गित गाउँदा गाउँदै..,द भ्वाइस अफ नेपालमा भक्कानो छोडेर रोइन मेचु !
काठमाण्डौ : द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २’ को टप १० मा पुग्न सफल मेचु धिमाल*ले निकै राम्रो प्रस्तुती दिएकी छन् । भारतले सिमाना मिचेर नेपाली*हरुले बिरोध गरेका बेला मेचुले देशभक्त राष्ट्रिय गित गाउँदा कार्यकर्ममा सन्नाटा छाएको थियो भने उनले बोलेका शब्दले हरेक नेपालीको शरीरमा काँडा उठेको थियो । मेचुले, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे, तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन धर्तीका छोराको, ए कहाँबाट हेरौँला संसार सन्झ्यालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने गित गएकी थिईन् ।
गित गाउँदै गर्दा बिचबिचमा शब्द पनि निकै मार्मिक थिए जस्ले मेचुको प्रस्तुतिलाई अझै दमदार बनाएको थियो । मेचुले गीतको प्रस्तुतीसंगै उनले बिचबिचमा गरेको अभिनयले झन मेचुको उचाइलाई निकै माथि पुर्याएको महसुस गरिएको थियो । मेचुले गित गाएर सकेपछि स्टेजको अगाडी भक्कानो छोडेर रोएकी थिइन् । उनि रुँदै गरेको देखेपछि जजहरु उनलाई उठाउन अगाडिनै जानु परेको थियो । जज राजु लामा, आस्था राउत र प्रमोद खरेल स्टेजमै पुगेका थिए ।
प्रमोदले मेचु*लाइ अंकमाल गर्दै उनलाई नरुन अनुरोध गरेक थिए । मेचुको यो प्रस्तुती संगै हरेक नेपालीको मन मुटुमा झनै ठाउँ पाएकी छन् । अहिले उनको चर्चा निकै बढिरहेको छ । मेचुको यो प्रस्तुतिलाई दर्शक श्रोताले पनि निकै मन पराएका छन् । अहिले यो भिडियो सार्वजनिक भएसंगै युटुबमा उनका फ्यान*हरुले निकै तारिफ गरेका छन् ।
आजको मौसम वर्षा र हिमपातको सम्भावना..,२ दिनसम्म सचेत रहन अनुरोध !
२ वर्ष साउदीमा काम गरेका उमेश यसरि बने “फुलन्देको आमा”
यस्ती पो श्रीमती.,श्रीमानले मलेसियामा कमाएको बचाउँछिन् र घर खर्च लुगा सिलाएर चलाउँछिन् !
मह र कागती तातोपानीमा मिसाएर पिउनुको फाइदा जान्नुहोस् !
देशमा स्थिरता हुनुपर्‍यो मलाई प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
आज मंसिर ७ गते शनिबारको राशिफल शंकटा माताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस्
चीन सधैँ नेपाल*को सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डता*को सम्मान गर्छ…
६० बर्ष*सम्म नागरिकता नपाँउदा सरकारी सेवा बाट बञ्चित…
भोलि शनिबार शंकटा माताको दर्शन गर्दै राशिफल हेर्नुहोस्
बिद्यार्थीले शुल्क फिर्ता माग्दा जिउँदै जलाइदिने प्रशासनको धम्की..,विद्यार्थीकाे आन्दोलनले ४ मेडिकल कलेज ठप्प !
महराको निवेदनमा उच्च अदालत*ले माग्यो जिल्लाको ‘कैफियत प्रतिवेदन’…
बिद्युत महसुल पनि अब घटाउछु ढुक्क हुनुस : कुलमान घिसिङ
आज देखि नेपाल-भारत का सीमाना चार दिन बन्द !
आज शुक्रबारको राशिफल बुढानिल्कण्ठको दर्शन गरि हेर्नुहोला